Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း)
Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အာသီးရောင် ပိုးဝင်တာကို မကုသပဲထားတဲ့အခါ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ အာသီးနာမှာပြည်တွေရှိနေတဲ့ အိတ်တစ်ခုပုံစံနဲ့တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အာသီးပြည်တည်ခြင်းက ကလေးတွေ လူပျိုပေါက်တွေနဲ့ လူငယ်တွေမှာအဖြစ်များပါတယ်။ဘတ်တီးရီးယား(strep) ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ လည်ချောင်းနာတွေ အာသီးရောင်တွေ ပျံ့နံှံ့တတ်တဲ့ ဆောင်းဦးကာလ အစနဲ့ နှောင်းပိုင်းတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။အလွန်အဖြစ်များပြီး မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မရွေးလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ချေများစေတဲ့အချက်တွေ ရှောင်ပြီး နေလို့ရနိုင်ပါတယ်။အခြားအချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အာသီးပြည်တည်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ –
လည်ချောင်းနာ အာသီးရောင်ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ဒါပေမယ့် အာသီးရဲ့ ရှေ့ နောက်ဘက်လေးမှာ ပြည်ရည်စုနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့အရာကတော့ ရောင်နေဖောင်းနေပြီး ဖြူ ဖြူ ရည်လိုအနာလို ဖြစ်နေပါတယ်။အာသီးပြည်တည်ခြင်း ရဲ့ လက္ခဏာတွေ မှာ –
အာသီးတစ်ဖက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဖက်စလုံးပိုးဝင်ခြင်း
လည်ပင်းနဲ့ မေးရိုးနားက အကျိတ်များရောင်နေခြင်း( ထိလျှင်နာခြင်း)
အာသီးပြည်တည်ခြင်းက အခြားပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ပြင်းထန်ရှားပါးတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ –
လည်ပင်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ ရင်ဘတ်၊ သို့ပိုးပျံ့သွားခြင်း
အချိန်မီမကုသရင် ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အခြားသောနေရာတွေအထိ ပျံ့နိငင်ပါတယ်။လေပြွန်ကိုလည်း ပိုပိတ်စေပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာတွေက အခြားသော ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ strep throat လိူမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုတွေ့လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
လူတိုင်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေက လုပ်ဆောငိမှုမတူကြတဲ့အတွက် သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရွေးချယ်ပါ။
Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အာသီးရောင်ခြင်းရဲ့ အခြားပြသနာတစ်ခုအနေနဲ့ ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။အာသီးမှာဝင်နေတဲ့ ပိုးကဘေးကိုပျံ့ခဲ့ရင် ပြည်တည်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။Strep ပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လည်ချောင်းနာခြင်းနဲ့ အာသီးရောင်ရောဂါခြင်းတွေမှာ ပိုးသတ်ဆေး( antibiotics) တွေသုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် အာသီးပြည်တည်ခြင်းကဖြစ်တာနည်းလာပါတယ်။
Mononucleosis ရောဂါ ကလည်း အာသီးပြည်တည်ခြင်းနဲ့ သွား၊ အာခေါင်ပိုးဝင်ခြင်း ရောဂါတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။အရမ်းရှားပါးတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ပိုးဝင်တာမရှိပဲနဲ့ အာသီးပြည်တည်ခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။ဒါဟာ သင့်လျှာအောက်မှာရှိတဲ့ တံတွေးထုတ်ပေးတဲ့ Weber gland တွေရောင်လို့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ သင့်ခံတွင်းနဲ့ လည်ချောင်းကို အရင်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် လည်ချောင်းတွင်း တစ်ရှူးနမူနာယူတာနဲ့ သွေးဖောက်စစ်တာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပြည်တညိတာရဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ –
လည်ချောင်း နဲ့ လည်ပင်းပတ်လည်မှာ နီရဲ ရောင်ရမ်းနေခြင်း
တစ်ဖက်တည်းမှာ ပြန်ရေကျိတ်တွေ ကြီးနေခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ CT scan တွေ MRI တွေရိုက်ပြီးပြည်တည်နာကို သေချာကြည့်ရှူပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင် ပြည်ကနေအနည်းငယ်ယူဖို့အတွက် အပ်အသေးလေးကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ရလာတဲ့ပြည်အရည်ကို ပိုးဝင်တာရှိမရှိစစ်ဖို့အတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။
Peritonsillar abscess (အာသီးပြည်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပိုးသတ်ဆေးတွေကတော့ အသုံးများဆုံးကုသနည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွေကိုဖောက်ထုတ်ပြီး ကုသမှုမြန်ဆန်အောင်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။Lancing ( လှီးဖြတ်နည်း) ကိုသုံးပြီးအရည်တွေစီးထွက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။အပ်ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ENT (နားနှာခေါင်းလည်ချောင်း) ဆရာဝန်တွေကဒီနည်းကိူ အများဆုံးလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
တကယ်လို့သင်က မစားနိုင်မသောက်နိုင်အောင် ဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ရေဓာတ်ဖြညိ့ဖို့ အကြောဆေးသွင်းရပါလိမ့်မယ်။အရမ်းနာနေတယ်ဆိုရင် အကိုက်အခဲပျောကိဆေးတွေ ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။နာတာရှည် ရောဂါတွေက ခဏခဏပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အာသီးကို ထုတ်ဖြစ်ပြီး နောင်ဖြစ်လာမယ့် ပိုဆိုးမယ့်အခြေအနေတွေကို ကာကွယ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
အာသီးပြည်တည်ခြင်း နဲ့ သင့်တော်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက ဘာတွေလဲ?
အောက်ပါ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကအာသီးပြည်တည်ခြင်း နဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
သင့်သွားတွေကို အမြဲကျန်းမာနေစေဖို့အတွက် အမြဲသွားတိုက်တာတွေ သွားစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာာ ရောဂါဖြစ်နိင်ချေ ပိုများပါတယ်။ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးဦးစားပေးတာတွေနဲ့ ဆေးလိပ်မသောက်တာတွေက ပြည်တည်နာဖြစ်တာကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
https://www.healthline.com/health/peritonsillar-abscess#overview1. Accessed October 17, 2017.
https://www.webmd.com/oral-health/guide/peritonsillar-abcess. Accessed October 17, 2017.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖျောဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖျောဝါရီ 9, 2018